Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mpitandro ny filaminana, miova ny sary | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mpitandro ny filaminana, miova ny sary
Par Les Nouvelles sur 11/09/2020
Fiovana goavana no tsikaritra eo anivon’ny mpitandro filaminana telo tonta ankehitriny. Toy ny manao fifaninana masina ireo miaramila sy zandary ary polisy eny an-kianja amin’ny fanehoana fa efa eny akaikin’ny vahoaka izy ireo fa tsy toy ny taloha intsony. Miova ny sary. Miova ho amin’ny fahatsarana ary irariana mba hitohy toy izany hatrany fa tsy sanatria toy ny afo-mololo ka hiredereda am-boalohany fotsiny ihany. Raha ny zava-misy tsikaritra mantsy dia manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpitandro filaminana satria matetika aza dia efa mihatra aman’aina mihitsy tokoa ny asa atao.
Indrisy anefa fa mbola misy ihany ireo minia mikipy sy minia tsy mahita izany ezaka ataony izany. Toy ny miasa jamba rafozana, ka mahaketraka ny olona tena miasa indraindray. Ny olon-dratsy indray no mahazo vahana kokoa. Etsy an-danininy aloha, ireo olon-tsotra iharan’ny asa ratsy indray no toy ilay voan’ny famaky, sady maratra no mandoa lasiroa. Etsy an-kilany, ny mpitandro filaminana manao ny asany no tratry ny fanakianana mivaivay.
Efa miresaka mpitandro filaminana ihany ka toa tsy hay ny tsy hiresaka ny zava-nisy teo anivon’ny polisim-pirenena tato ho ato. Fahiny dia nalaza ny hoe “Aleo tsy misy toy izay polisy”. Nentina nilazana izany fa efa fara-fidy vao miditra amin’ny polisy. Tato ho ato anefa, nanao ezaka lehibe ny polisim-pirenena amin’ny fanadiovana anatiny. Tsy ekena intsony ny kolikoly, ny fanamparam-pahefana, ny fanaovana rainazy amin’ny asa sy ny sisa. Noezahina nampitomboina araka izay tratra ny fitaovana mba ahafahana mametraka fandriam-pahalemana sahaza.
Toraka voninkazo tsy nisy toy izany no niraradrararaka teny amin’ny tranokalam-pifandraisana tamin’ny fandraisana andraikitra nataon’ny polisy nandritra ny fanadinana CEPE raha nikarakara ireo ankizy adinon’ny ray aman-dreniny ny polisy. Taloha kelin’io, niparitaka ny sarin’ilay polisy nametraka arovava tamin’ny beantitra iray. Tsy lazaina intsony ny momba ilay polisy mpandrindra fifamoivoizana nahazo fankasitrahana noho ny fahaizany mifandray aman’olona. Ohatra vitsy ao anatin’ny maro tsy voatanisa ireo.
Fa na izany na tsy izany, mbola misy ihany ireo mitsivalam-pandry sy manao fandoto iray tandroka mandoto ny maro. Misy dia tsy tahotra tsy henatra manao ny fanaony eny an-dalana eny. Resaka kolikoly io. Mbola ilana ezaka matotra satria fery kely tsy voatandrina matetika no tonga aretina mihady.